Dominica waxay soo tabisay kiis cusub oo ah coronavirus
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » Dominica waxay soo tabisay kiis cusub oo ah coronavirus
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dominika • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Caafimaadka Dominica, Caafimaadka iyo Maalgashiga Caafimaadka cusub, Dr. Irving McIntyre ayaa ku dhawaaqay kiis dheeri ah oo ku saabsan Covid-19 in Dominika. Ogeysiiska waxaa lagu sameeyay inta lagu gudajiray 2nd kulanka 1st kalfadhiga 10th Baarlamaanka Aril 6, 2020. Tani waxay ka dhigeysaa wadarta tirada wanaagsan ee COVID-19 kiisaska 15 iyadoo hal qof uu soo bogsaday.
Ilaa hadda, wadar ahaan 293 qof ayaa la baaray mana jiraan dad u dhinta COVID-19. Wadar ahaan 109 qof ayaa ku jira karantiil xarun dowladeed, si kastaba ha noqotee dadka qaar ayaa la filayaa in guryahooda loo diro markay dhammeeyaan 14 maalmood ee ay ku sugnaayeen xarunta.
Baarlamaanka Dominica wuxuu sii ansixiyay sharciga siinaya in bandowga hada jira lagu kordhiyo 21 maalmood oo dheeri ah markii uu dhacayo Abriil 20, 2020, iyo in Xaaladda Degdega ah lagu kordhiyay 3 bilood oo dheeri ah si loo yareeyo faafitaanka COVID-19. Xeer ilaaliyaha guud Levi Peter ayaa sharaxay in xeerarkan wax laga badali karo hadii xaaladu hagaagto.